सिर्जना बस्नेतको ह'त्या नै भएको हो? प्र'ह'री'को ब'या'न जस्ताको त्यस्तै
सिर्जना बस्नेतको ह’त्या नै भएको हो? प्र’ह’री’को ब’या’न जस्ताको त्यस्तै
सोमबार बिहान घर अगाडि अ’र्ध’न’ग्न अवस्थामा फेला परेकी सृजना बस्नेतको ह’त्या भएको आशंका गरिएको छ । घरका सबै गेट भित्रैबाट लक गरिएको अवस्थामा सृजनाको श’व घर बाहिर फेला पर्नुले उनको ह’त्या गरिएको आशंका गरिएको हो ।
आइतबार बेलुका करिब आठ बजेसम्म घरमा भएकी सृजना सोमबार बिहान घर अगाडि मृ’त अवस्थामा फेला परेकी उनका दाजु रमेश बस्नेतले बताए । चारतले घरको दोस्रो तलामा परिवारसँगै बस्ने सृजना चौथो तलामा सुत्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
बहिनीको श’व घर बाहिर फेला परेपनि घरको सबै गेटहरू भित्रबाट बन्द भएकाले बहिनीको ह’त्या भएको हुन सक्ने रमेशले बताए । श’वको पछाडीको भाग तथा टाउकोमा चो’ट र घ’ट’नास्थलमा र’ग’तको दाग देखिएको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताए ।
प्र’ह’रीले घ’ट’नाको सत्यतथ्य अ’नु’स’न्धा’न गर्न भन्दै धरानबाट ‘ट्र’या’क’र डग’ झिकाएको थियो । उक्त कुकुर मृ’त’क बस्ने घरको तेस्रो तलाको बरण्डासम्म पुगेर फर्किएको जिल्ला प्र’ह’री कार्यालय झापाका प्रवक्ता राकेश थापाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट फ’रे’न्सि’क डाक्टरको समुहले घ’ट’ना’स्थलमा श’व’को बाहिरी परीक्षण गरेको थियो । पो’स्ट’मा’र्ट’मका लागि श’व धरान पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीका डिएसपी सन्तोष आचार्यले जानकारी दिए । हालसम्म कसैलाई प’क्रा’उ नगरिएको उनले बताए ।
प्र’ह’री’ले प्रारम्भिक कुनै जानकारीसम्म नदिएको भन्दै मृ’त’कका आफन्त तथा स्थानीयले शव उठाउन अवरोध गरेपछि केहि समय घ’ट’ना’स्थलमा तनाव सिर्जना भएको थियो । प्र’ह’री’ले घ’ट’ना’स्थलमा ढु’ङ्गा हा’न्ने केही युवालाई प’क्रा’उ गरेको जनाएको छ । प्रवक्ता थापाका अनुसार घ’ट’ना’को इलाका प्र’ह’री कार्यालय अनारमनी, जिल्ला प्र’ह’री कार्यालय झापा र प्रदेश प्र’ह’री कार्यालय विराटनगरको अ’नु’स’न्धा’न टोलीले अ’नु’स’न्धा’न गरिरहेको छ ।
इलामको साखेजुङ्ग मुल घर भएकी मृ’त’क बस्नेत आफ्नी आमा तथा दाजुको परिवारसँग केही बर्षदेखि बिर्तामोड ५ स्थित सानिमाको घरमा भाडामा बस्दै आएकी थिइन् । उक्त घरमा प्रायः पारिवारिक नाता पर्ने मानिसहरु नै बस्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
उनी २०७० सालदेखि स्थानीय ग्लोबल सहकारी संस्थामा बजार प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्दै आएकी थिइन् । पछिल्लो समय ग्लोबल मर्ज भएर सृजनशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नामबाट कारोबार गरिरहेको व्यवस्थापक कुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।